Dalalka Carabta oo xidhiidh lala yeesho waxa ka waxtar badan Iiraan oo xidhiidh lala yeesho | CeelGardi News
Dalalka Carabta oo xidhiidh lala yeesho waxa ka waxtar badan Iiraan oo xidhiidh lala yeesho
Iiraan waxa go’doomiyey waa Carab, marka Israa’iil iyo Iiraan noqoto waxay sii fogeeyaan Iiraan, waxa jira dalal Carab ah oo xidhiidh dhow la leh Isra’iil oo dhulkii Falastiin haysta, halka Iraan ay mar walba sii fogeeyaan.
Iiraan xaasidnimada lagu hayo waxay sababtay inay la tartanto dunida awoodaha is biday oo ay yeelato Quwadda aduunka ugu weyn ee Nuclear-ka, halka Carabta ka yihiin kuwo wax rag kale sameeyey ka iibsada oo aan awoodin inay wax yar samaystaan.
Haddii kuwii dad kugu xigay ku xisdiyaan waxaad noqonaysa bir finiin ka hadhay oo kuwii ku xaasiday waad ka horumaraysaa.
Wasiirkii hore ee Arimaha Dibada Johnson Kerry horana u ahaan jirey nin suxufi ah ayaa sheegay in dalalka Carabta gaar ahaan Sucuudigu mar walba usoo jeedin jireen inuu Maraykanku weeraro Iiraan, haseyeeshee uu ugu jawaabi jirey wada hadal fiican baa noo socdo marka sabab loo weerara ma jirto.
Waxa suurogal ah in aanay marna kala hadal masaakiinta Israa’iil habeen iyo maalin duqaynayso ee guryahoodii iyo dhulkoodiiba la dhacayo ee Maraykanku taageerayo, laakiin dal kale oo islaam ah ay ku dirqinayaan in la weeraro sabab la’aan.
Sidaas oo kale ayey dal wal oo Iiraan xidhiidh dhow la leh ku dirqiyaan inay lacag siiyaan u jara xidhiidhka tusaale waxa kugu fiilan, dalka Jabuuti xidhiidh dhow bay lahaayeen iiraan oo waxay u dhiseen dhismaha Baarlamaanka Jabuuti iyo dhawr waddo, nasiibdaro sanadkii 2016-kii bishii January 7, ayey Jabuuti xidhiidhka u jartay Iiraan, iyado ay ku dirqiyeen Sucuudiga oo wax la kala qaatay.
sidoo kale,isla sanadkaaasi bishii January 2016-kii ayaa dawladdii Xasan Sheekh dalkeeda kaga saartay safiirkii Iiraan ee Muqdisho u fadhiyey, iyadoo loo qabtay inuu dalka kaga baxo muddo 72 saacadood gudahood ah, waxaana Iiraan Soomaaliya ku lahayd hay’addo samafal oo dadka danyarta ah caawin jirey, xiitaa la isma waydiin dadkii ay gacanta ku hayeen Sucuudigu ka kafaalo qaado ama ha quudiyo.
“Kadib baadhitaan dhab ah oo la sameeyay, laguna ogaaday in Iran ay ka fulineysay Soomaaliya howlo khalkhal gelinayay amniga, deganaanshaha, wadajirka iyo midnimada Ummadda Soomaaliyeed ayaa dalka looga saaray safiirkii Iiraan u fadhiyey Muqdisho”ayaa lagu yidhi qoraal ka soo baxay xukuumadii waagaasi ee Soomaaliya.
Haseyeeshee way iska cadayd inuu Sucuudigu u yeedhinayo Soomaaliya oo uu isagu Xasan Sheekh Maxamuud ka dalbaday in Soomaaliya laga saaro Iiraan, iyado aynu ognahay in sanad walba uu dad soomaali ah sabab la’aan usoo mustaafuriyo xiitaa aanau jirin cid u dooda xuquuqdii muwaadiniintaasi oo iyagoo shaqooyinkii ku jira la soo qabto markiiba Soomaaliya lagu soo tuuro.
Dal wal oo xidhiidh ay leeyihiin Iiraan waxa uu Sucuudigu ku bixiyaa lacag faro badan si ay go’doon u noqoto, dhaqaalaha uu ku bixiyo dagaalka Iiraan ee aan tooska ahayn waxay ku samaysan kari lahaayeen diyaarado iyo hubka waaweyn ee dalal kale ka soo iibsadaan.
Wadamadda Carabtu aad bay u ficil xun yihiin, maalmihii xulufadda Sucuudigu hogaaminayeen Qadar xidhiidhka u jareen ee xiitaa Caanihii ay reer Qadar ka iibsan jireen ka joojiyeen waxa diyaarado Caano ah usoo direy Iiraan oo u arkaysay fursad ay Qadar xidhiidh ku wada yeelan lahaayeen, waxaanay Iraan heshay quwado islaami ah oo ay dhabarka saarto oo Carab uga dhiciya waa Iiraan iyo Turkiga.
Maadaama oo Iiraan raadinayso dalal ay xidhiidh dhow la yeelato oo ay wax ku darsato, Somaliland raadinayso dalal quwad leh oo dhabarka saarto, waxa cad in labadda dhinac isku baahan yihiin balse ay kala meermeerayan oo waliba dhanka Somaliland ka maqan tahay ragnimadii ay ku dhiiran lahayd inay xidhiidh la yeelato Iiraan, haseyeeshee Somaliland waxay indhaheedu wali sii jaleecayaan dalal aanay dan ku qabin laabtase ka sii jeceshay inay iska ag joog joogto.
Dal wal oo xidhiidh ay leeyihiin waxa uu Sucuudigu ku bixiyaa lacag faro badan si ay go’doon u noqoto, dhaqaalaha uu ku bixiyo dagaalka Iiraan ee aan tooska ahayn waxay ku samaysan kari lahaayeen diyaarado iyo hubka waaweyn ee dalal kale ka soo iibsadaan.
Qalinkkk Barkad Ladiif